315MHz 433MHz Frequency Programming TPMS တာ ၀ န်ရှိသူများသည် Hummer အတွက် GMC အတွက် Chevrolet အတွက် Cadillac အတွက် Buick အတွက်တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ် 315MHz 433MHz ကြိမ်နှုန်းအစီအစဉ် Programming TPMS တာယာထုတ်လုပ်မှု၊ တာ ၀ န်ရှိစက်ရုံ၊ NINGBO ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မူလစာမျက်နှာ>ထုတ်ကုန်များ>TPMS အာရုံခံကိရိယာ>TPMS ကိရိယာများ
315MHz 433MHz Frequency Programming TPMS Hummer အတွက် GMC အတွက် Chevrolet အတွက် Cadillac အတွက် Buick အတွက်တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ်
Code Reader ပါ
သက်ဆိုင် & Models:
တာယာ qqr tpms အာရုံခံကိရိယာကိရိယာများတစ်လောကလုံးစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်
315MHz နှင့် 433MHz ကြိမ်နှုန်း
Kpa, ဘား, Psi
ဘဝအချိန်အခမဲ့ update ကို
တစ်လလျှင် 20000 အပိုင်းပိုင်း
လေယာဉ်ဖြင့် DHL, TNT, UPS
TPMS System Tools 1pc / box စံတင်ပို့ပုံးနှင့် Pallet
အရေအတွက် (သတ်မှတ်ချက်များ) 1 - 10 > 10
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ထားသောမျိုးဆက်သစ် TPMS ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်လူသိများသော TPMS အာရုံခံကိရိယာများကိုသက်ဝင်စေရန်၊ TPMS အာရုံခံအခြေအနေကိုဖတ်ရန်၊ TPMS စနစ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ပရိုဂရမ်အာရုံခံများကိုစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ကားမော်ဒယ် ၉၈% ကျော်ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်
TPMS DTCs၊ မျက်နှာပြင် DTS ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ပါ
4.Scan TPMS အာရုံခံကိရိယာ ID နှင့် OEM ကုဒ်
6.Check key ကို fobs
1. TPMS အာရုံခံကိရိယာအမျိုးမျိုးသော TPMS အာရုံခံကိရိယာများ၏ဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်တိကျမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးပါ။
အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ရုရှား၊ နယ်သာလန်၊ သုံးစွဲသူသည်သူလိုအပ်သောဘာသာစကားကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။
3.Manual Input ID, Duplicate ID နှင့် Automatic Creat ID တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
4. လှုံ့ဆော်မှုကိုပရိုဂရမ်းမင်းပရိုဂရမ်ဖြစ်သောအာရုံခံကိရိယာ ၂၀ အထိ - အချိန်တိုအတွင်းတွင်အာရုံခံကိရိယာအတွက်ဝယ်လိုအားပမာဏများစွာကိုဖြေရှင်းပါ။
၅။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှု - ကားတစ်စီးအတွက်တစ်ချိန်တည်းတွင် 5-4 အာရုံခံကိရိယာများကိုလွယ်ကူစွာပရိုဂရမ်သွင်းရန်ပြုလုပ်ပါ။
6. Modify ID- လျင်မြန်စွာပြုပြင်မွမ်းမံအာရုံခံကိရိယာ။
7. Sensor Postion Change - တာယာများပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်တာယာ၏အနေအထားကိုပြုပြင်ပါ။
၈။ USB upgrade Mode - ပြproblemနာရှိသောယာဉ်များအတွက်ယာဉ်ကြောအသစ်တင်ခြင်းနှင့်မြန်ဆန်စွာဖြေရှင်းခြင်း။
၉။ အာမခံ ၁ နှစ်။
Size: 19.3 * 10.2 * 4.2cm
ဘက်ထရီ: 3.7V လီသီယမ်ပေါ်လီမာဘက်ထရီ 3500mAh
ပါဝါ adapter: 5V1A
operating အပူချိန်: -5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်သည့်အပူချိန်: -20 ° C မှ 70 ° C
ID ကို format: hexadecimal နှင့်ဒimalမ
ဖိအားကိုဖတ်ရှုခြင်း - Kpa၊ Bar၊ Psi
Sunsoul ကုဒ် ပါဝါအဒက် ဘက်ထရီ Operating အပူချိန်
Q01 5V 1A 3.7V လီသီယမ်ပေါ်လီမာ -5 ° C မှ 50 ° C မှ